Inona no sakafo mety amin'ny taonan'ny alika tsirairay? | World Dogs
Susana godoy | | Alika ankapobeny
Rehefa manana biby fiompy isika dia maniry ny hanana ny tsara indrindra. Satria, Ny iray amin'ireo ahiahy tsy azontsika atsahatra dia ny fahafantarana hoe inona no sakafo mety ho an'ny sokajin-taonan'ny alika, satria marina fa isaky ny dingana eo amin’ny fiainanao ianao, dia mila sakafo sy fiovana voafaritra kokoa izay tsy maintsy horaisintsika.
Izany no antony ahitantsika safidy sy marika tsy misy farany eny an-tsena. Saingy rehefa dinihina tokoa mila mifidy ireo izay manana akora voajanahary bebe kokoa isika, mahasalama ary isan-karazany. Zavatra mitranga amin'ny naku, ohatra. Hatramin'izay vao fantatray marina izay entin'ny volony. Raha te-hikapoka foana ny marika sy hanana fahasalamana vy, aza very izay rehetra manaraka.
1 Ny sakafo mety amin'ny taonan'ny alika tsirairay: Puppies
2 Famahanana alika tanora
3 Inona no tsara ho an'ny alika lehibe
Ny sakafo mety amin'ny taonan'ny alika tsirairay: Puppies
Amin'ny herinandro voalohany amin'ny fiainana dia azo antoka fa efa fantatrao fa ny rononon-dreny no hamelona azy ireo. Mila izany ny puppies satria hanome azy ireo ny soatoavina ara-tsakafo ilainy amin'ny andro voalohany amin'ity fiainana vaovao ity. Inona no tena ilaina mba hampivelatra ny fiarovan-tenanao. Ny ronono dia manana proteinina ary koa calcium, izay tena ilaina tokoa.
Marina izany Manomboka amin'ny herinandro fahenina na fahafito, dia afaka mampiditra zavatra hafa amin'ny sakafony izy ireo. Tsy maintsy sakafo maivana na mando izy io mba handeferany tsikelikely. Inona no azonao ampidirina ny porridges amin'ny sakafo mafy. Tsy maintsy atao tsikelikely izany, satria manomboka amin’ny herinandro fahasivy eo ho eo dia ho tonga ny fampinonoana. Noho izany antony izany, ny herinandro voalohany amin'izy ireo dia tena zava-dehibe, afaka mampifangaro ronono amin'ny sakafo malefaka nefa tsara. Hatramin'izay vao afaka mahazo toky isika fa manohy mihinana ireo soatoavina ara-tsakafo izay tena ilainy tokoa izy ireo. Miloka amin'ireo izay manana zavatra amin'ny hena nefa tadidio ny lohahevitry ny fampidirana rano.
Famahanana alika tanora
Amin'ny sivy volana dia afaka milaza isika fa tsy misy alika intsony izy ireo ary tsy ho ela dia hiroso amin'ny dingana manaraka amin'ny resaka famahanana, satria ho antsika dia ho zanatsika foana izy ireo. Na dia marina aza fa tsy maintsy manonona izany isika Ny karazany lehibe dia miadana kokoa ny fitomboany, noho izany mandra-pahatongan'ny 24 volana dia tsy maintsy manitsy ny sakafony isika. Misy sakafo manokana ho an'ity dingana ity.
Izany dia nilaza, ny alika tanora dia tsy mila sakafo matavy toy ny tamin'ny herinandro voalohany nahaterahany, zavatra mitranga koa amin'ny proteinina. Izany hoe tsy maintsy mitazona azy ireo isika fa ao anatin'ny filaminana. Ny tsara indrindra dia ny miloka amin'ny sakafo tsy dia mazoto loatra, mba hitazonana ny lanjanao sy ny fahasalamanao ao anatin'ny fetra tsara. Avy eo ary satria mbola kely izy dia afaka manomboka mampifangaro ny sakafon'ny puppy miaraka amin'ny sakafo ho an'ny alika lehibe ianao. Tohizo ny misafidy ilay mando amin'ireo volana voalohany amin'io dingana io. Tsarovy fa hanohy hiloka hatrany amin'ny kalitao amin'ny sakafo izahay. Koa raha misalasala ianao, dia ataovy izay hahazoana antoka fa misy ampahany betsaka amin'ny hena ny recipe fa tsy misy preservatives na additives mitovy aminy.
Inona no tsara ho an'ny alika lehibe
Tonga ny taona iray izay tsy azo ihodivirana fa manimba bebe kokoa ny fandehan'ny fotoana. Hanomboka hiseho ny aretina ary amin'ny karazana sasany dia matetika kokoa izy ireo. Ny biby sasany dia manomboka amin'ny fihetsehana kely ary hihena ihany koa ny fandevonan-kanina. Noho izany ny habetsahan'ny tavy dia mety ho iray amin'ireo olana lehibe indrindra aminao. Voalohany indrindra, hifidy ny sakafo sahaza ho an'ny sokajin-taona tsirairay ny alika, indray mandeha. Amin'ity tranga ity, dia io no mora levonina.
Amin'izao fotoana izao dia tsara kokoa ny mitsidika ny mpitsabo biby mba hanampiana antsika eo anelanelan'ny aretina sy ny sakafony. Saingy amin'ny maha-fitsipika ankapobeny dia afaka milaza aminao izahay fa ny sakafo manokana sy Senior karazana manana fandevonan-kanina mora kokoa, ary koa ny a be vitamina toy ny phosphore sy ny otrikaina hafa toy ny antioxidants. Satria izany rehetra izany dia hahatonga ny alikantsika hanana ny soatoavina ara-tsakafo mifanaraka amin'ny taonany. Indray mandeha izy ireo dia miloka amin'ny hena, fa kely kokoa amin'ny voamadinika. Tsy misy fanampin-javatra foana araka ny voalazanay teo aloha. Ahoana no famahanana ny alikanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Inona no sakafo mety amin'ny taonan'ny alika tsirairay?